News - Ma rabtaa awood dheeri ah, laakiin dhakhso badan? Tiknoolajiyadan cusub ee lacag bixinta ee GaN ayaa sheeganeysa inay gaarsiin karto
Maalmaha aad lugeyneyso leben xoog badan iyo fiilooyin badan si aad qalabkaaga uga ilaaliso inay kor u kacdo ayaa laga yaabaa inay dhammaato. Saacadaha sugitaanka taleefankaaga casriga ah ama laptop-kaaga si ay kuugu soo oogaan, ama aad ula yaabto xeedho kulul oo naxdin leh, sidoo kale waxay noqon kartaa wax la soo dhaafay. Teknolojiyada GaN ayaa halkan taal waxayna ballanqaadaysaa inay wax walba ka wanaajineyso
"Silicon waxay gaaraysaa xadkeeda dhanka waxtarka iyo heerarka awooda," Graham Robertson, oo ah afhayeen u hadlay ayaa u sheegay Digital Trends. "Marka, waxaan ku darnay Teknolojiyada GaN, oo ah cunsur 31 iyo cunsurka 7 oo la isku daray si loo sameeyo gallium nitride."
"Silicon waxay gaaraysaa xadkeeda dhanka waxtarka iyo heerarka awooda."
Qaybta "GaN" ee GaNFast waxay u taagan tahay gallium nitride, qaybta "Degdeg ah" waxay tilmaamaysaa xawaaraha lacag-bixinta oo ka weyn. Navitas Semiconductors waxay ku isticmaaleysaa qalabkan Power ICs (maareynta awoodda isku-dhafan wareegyada), oo ay u iibiso kuwa wax soo saara.
"Waxaan ku dhejinay lakab silsilad-dhaqameed dhaqameed taasna waxay u qaadaysaa waxqabadka heerar cusub oo leh xawaare dhakhso badan, wax-qabad badan, iyo cufnaan sare," ayuu yiri Robertson.
Awoodda ayaa madax xanuun ku dhalisay korantada la qaadan karo laga bilaabo maalinta koowaad. In kasta oo xawaaraha degdegga ah ee hal-abuurnimada adduunyada casriga ahi, haddana waxaannu isticmaalnay isla baytariyada lithium-ion, iyo dhammaan xaddidooda, muddo haatan laga joogo 25 sano. Taas macnaheedu waxa weeye inta badan aaladahayada la qaadan karo ayaa si dhib yar ku bixi kara maalin iyaga oo aan lagu xidhin.
Meeshii aan ku aragnay hal-abuurnimo badan sanadihii la soo dhaafay waxay ku socotaa xawaare dheereeya oo xawaareyn ah, laakiin bixinta awood badan oo lagu rakibo xeedho dhaqameedka ayaa u baahan inay ahaadaan kuwo aad u weyn oo soo saara kuleyl badan, taas oo ah koronto lumisay. Sida laga soo xigtay Navitas, GaNFast Power ICs waxay bixiyaan 3x cufnaanta sare, 40 boqolkiiba kaydinta tamarta, iyo 20 boqolkiiba kharashka nidaamka.
Waxay sidoo kale la jaan qaadayaan Qualcomm's Quick Charge 4.0 qeexitaan, taas oo ah wax naadir ah hadda, waana inay u dhigantaa shan saacadood oo nolosha batteriga casriga ah laga bilaabo shan daqiiqo oo keliya. GaNFast wuxuu la shaqeeyaa qeexida Power Delivery sidoo kale, taas oo ah taleefoonada caadiga ah sida Google Pixel 3 iyo laptop-yada sida Dell ee XPS 13. Si kastaba ha noqotee, waxaa xusid mudan in dekedaha ay bixin karaan midkood QC 4.0 ama PD, labadaba maahan inay taasi jabineyso qeexida USB-C PD.